Madaxweyne Farmaajo oo berri hortagaya Baarlamaanka xilli aan heshiis laga gaarin khilaafka Doorashooyinka -
Home News Madaxweyne Farmaajo oo berri hortagaya Baarlamaanka xilli aan heshiis laga gaarin khilaafka...
Madaxweyne Farmaajo oo berri hortagaya Baarlamaanka xilli aan heshiis laga gaarin khilaafka Doorashooyinka
Golaha Shacabka ayaa ku dhawaaqay inuu berri jiro kulan gaar ah oo ahaa kulankii uu Madaxweynaha soo codsaday inuu qudbad u jeediyo golaha.
Madaxweyne Farmaajo oo qorshihiisu ahaa inuu maanta hortago golaha ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii maanta oo ahayd Jimce ay u ahayd maalin fasax ah xildhibaanada baarlamaanka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu berri oo sabti ah bishuna ay ku beegan tahay 6da Febraayo uu qudbad u jeediyo baarlamaanka, waxaana ka haray oo kaliya muddo labo cisho ah mudada xil hayntiisa.
Shirka ayaa la isku mari waayay arrinta ku saabsan gobolka Gedo,waxaana dhowrkii maalmood ee uu shirku socday lagu guuleysan waayay in xal laga gaaro khilaafka u dhexeeya dowlada federalka iyo Maamulka Jubba.
Beesha Caalamka ayaa cadaadis weyn ku saartay dowlada federalka iyo dowlad goboleedyada in xal laga gaaro dhammaan khilaafyada hareeyey qabashada doorashada dalka.
Previous articleWhen blockbusters are not seen, French museums ask to reopen “for an hour, a day, a week”
Next articleMadaxweynaha Jubbaland Axmed oo goor dhow saxaafada la hadlaya